Love, Death + Robots Vol. 3' Trailer သည် Gore, Robots နှင့် David Fincher ဒါရိုက်တာဇာတ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်။
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	Love, Death + Robots Vol. 3' Trailer သည် Gore, Robots နှင့် David Fincher ဒါရိုက်တာဇာတ်ကားဖြင့်ရောက်ရှိလာသည်။
၎င်းသည် အကြိုက်ဆုံးအချို့နှင့် ဒါရိုက်တာ David Fincher ကို ပြန်လည်ပေးအပ်သည်။
by Trey Hilburn III ကို မေလ 9, 2022 3,534 အမြင်များ
Netflix ၏ စိတ်အားထက်သန်သော ကဗျာစာအုပ်၊ မတ်ေတာ, မရဏ + စက်ရုပ် ပြန်လာပြီ vol ။ 3. ဤအသံအတိုးအကျယ်ကို ပြန်လည်ရရှိစေပါသည်။ Deadpool ဒါရိုက်တာ Tim Miller တို့နဲ့အတူ ခုနစ် နှင့် ရာသီခွင် ဒါရိုက်တာ David Fincher မကြည့်ရသေးတဲ့ သရဲအကောင်တွေ ဘယ်လောက်ထိ တုန်လှုပ်နေလဲ။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်။ 1 နှင့် vol 2. တော်တော်များများက စောင့်ကြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပုံရပေမယ့် ဆက်ပြီး မကြည့်ရက်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ မင်းကြိုက်တဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို၊ ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့ အမိုက်စား အမိုက်စားတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးပြုပြီး ကျေးဇူးပြုပြီး ကြည့်ရှုပေးပါ။ 1 နှင့်2ဒါမှသင်ဒီမှာ Vol ။3ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းရောက်ရှိသောအခါ။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုစီနှင့် ၎င်းတို့၏ ဇာတ်လမ်းများသည် တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နေသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
In လေယာဉ်ခရီးစဉ်။3Fincher သည် ရုပ်ရှင် အပိုင်းများထဲမှ တစ်ခုသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သူ စားပွဲကို ယူလာပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်၊ ဤအရာများပါရှိသော တောရိုင်းစီးခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပါသည်။ ရယ်မောခြင်း၊ အော်ဟစ်အားပေးခြင်းမှသည် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း မှန်ကန်စွာ ငိုကြွေးခြင်းဆီသို့ ရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆေးတောင့်တစ်ခုစီသည် မျိုချရန်အတွက် မတူညီသော ဝိဇ္ဇာ၏ဖော်မြူလာကို သယ်ဆောင်သည်။
ကျွန်တော်သည်ရိုင်းသောစီးခြင်းနှင့် ကာတွန်းပုံစံကို အဆက်မပြတ်ပြန်ဆွဲနေပါသည်။ သကျသခေံ အဲဒီထဲမှာရှိတယ်။ သကျသခေံ Vol တွင်ရှိသည်။ 1၊ ဒါကြောင့် အဲဒါကို စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်။ Clive Barker နဲ့ Dario Argento တို့ဟာ အက်ဆစ်နဲ့တွဲပြီးတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုပ်သလိုပါပဲ။
Fincher ၏အပိုင်းအတွက် ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော အကျဉ်းချုပ် ခရီးသွားတာ မကောင်းဘူး။ ဤကဲ့သို့သောသွား:
Jable ငါးမန်း အမဲလိုက် ရွက်လွှင့်သင်္ဘောတစ်စင်းသည် ၎င်း၏ အစာစားချင်စိတ်ကြောင့်သာ ဉာဏ်ရည်နှင့် အရွယ်အစားနှင့် လိုက်ဖက်သည့် ဧရာမ crustacean တစ်ကောင်က တိုက်ခိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသေကောင်နှင့်အတူ ပုန်ကန်မှု၊ သစ္စာဖောက်မှုနှင့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု… David Fincher ၏ ပထမဆုံး ကာတွန်းရုပ်ရှင်ကို ကြိုဆိုပါသည်။
အတွက်အနှစ်ချုပ် မတ်ေတာ, မရဏ + စက်ရုပ် ဤကဲ့သို့သောသွား:
အမ်မီဆုရှင် ကာတွန်းကဗျာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်, သေဆုံးခြင်း + စက်ရုပ် Tim Miller (Deadpool, Terminator: Dark Fate) နှင့် David Fincher (MINDHUNTER, Mank) တို့မှ ထုတ်လုပ်သော တတိယမြောက်တွဲ အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့် အလှတရားတို့သည် ရှေးခေတ်မကောင်းမှုတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခြင်းမှ ဟာသဇာတ်ဆောင်တစ်ခုအထိ ချဲ့ထွင်ထားသည့် အပိုင်းသစ်များတွင် ပေါင်းစပ်ထားသော စိတ်ကူးယဉ်၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ဇာတ်လမ်းတိုများနှင့် သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဉာဏ်ပညာနှင့် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ တီထွင်မှုတို့နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ဒါတွေအားလုံးဟာ လက်ပတ်နာရီတစ်ခုလိုပါပဲ။ Vol.1 နှင့် Vol.2ခုစလုံးကို Netflix တွင်ရနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ၊ တတိယမြောက်ဝင်ရောက်မှုသည် မေလ 20 ရက်နေ့မှစ၍ Netflix သို့ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သည်။